Chọghị Ogologo Azụmaahịa Iji Ghọta Nke a | Martech Zone
Ọ dị mma, ọ bụ oge maka ụda. Izu a a kụrụ m ihe ugboro ole na ole, ọ ga-abụrịrị na ụfọdụ n'ime ndị folks emeela ya ma ọ bụrụhaala na ha nwere azụmaahịa. Achọrọ m ịnweta ihe ole na ole mgbe ị na-aga mkparịta ụka na ịzụta ọrụ n'aka gị ọzọ Agency.
Thegwọ ahụ bụ Ihe You Na-akwụ, Ọ Bụghị Ihe You Na-enweta
Nke a bụ ọnụahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na-achọ ịzụta. Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa ngwaahịa abụọ ma ọ bụ ọrụ abụọ nwere ike bụrụ otu, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na-enweta agaghị adị otu. N'ihi ya, biko egbula maka ndepụta ịzụ ahịa ihe nzuzu ma rịọ maka nkwuputa zuru oke… anyị maara ihe ị na-eme. Ga-ewere ndepụta ịzụ ahịa wee rịọ nkwupụta a ga-akwụ ụgwọ ma zụọ ndị ọzọ. Anyị abụghị ndị ọzọ. Na agbanyeghị etu esi azụpụta ndepụta ịzụ ahịa, m na-ekwughachi, anyị abụghị ndị ọzọ. Ihe anyị nyere gị ga-adị iche. Njirimara dị iche iche, ọrụ dị iche iche, usoro oge dị iche iche, omume dị iche iche na nsonaazụ azụmahịa dị iche iche.
Y’oburu n’acho ahia na ulo oru nke n’eji ego, I gha adighi agha nke n’amaghi ahia. N'ebe ahụ, m kwuru ya. Ahịa ntanetị abụghị Wal-mart. Kwụsị ya.
Paykwụ ụgwọ pere mpe apụtaghị na ị zọpụta ego
Ihe ị kpebiri ma kwenye na ịkwụ ụgwọ bụ, olile anya, jikọtara ya na uru ị buru n'amụma na ị ga-enweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n ’inwetara akwụkwọ ikikere sọftụwia kwa afọ yana sọftụwia ahụ nyere gị aka ịme ihe ọfụma (aka: Return on Investment), nyeere gị aka ịzụ ahịa karịa (aka: Return on Investment), nyeere gị aka inweta azụmaahịa ọzọ (aka: Return on Investment) ma ọ bụ enyere gị aka ịbawanye uru (aka: Laghachi na Investment) mgbe ahụ uru nke ihe ị natara karịrị ụgwọ ị kwụrụ. Nke a bụ ihe ọma. Nke a bụ ihe ị chọrọ ime.
N'aka nke ọzọ, na-akwụ ụgwọ Mpekarị ego na enweghi nloghachi na ulo oru mbo di njo. Nke a pụtara na ego furu efu… ọ bụghị echekwa ego. Ya mere, gaa zụta akara ngosi ahụ na saịtị nke igwe mmadụ karịa ịchụ ụgwọ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ma na-emefu ọnụọgụ isii ka ọ dị ka otu ijeri dollar ijeri kama ịchekwa ebe a na-ere mmanya. Kwesịrị ịtụ anya nsonaazụ dị iche na uru dị iche maka ego ị tinyere.
Paykwụ ụgwọ ọzọ apụtaghị na ị dọpụchara
My Mama telivishọn dị mebiri n'izu a. O leghachiri anya n’azụ ma ọ dị afọ asaa, ọ na-efu $ 7 azụ ya mgbe ọ zụrụ ya. Taa, mama m nyere iwu ka igwe onyonyo ka mma karịa nke nwere 2,200 $. Ọ tụrụ ya n'anya na otu teknụzụ si malite ngwa ngwa na otu ọ ga - esi zụta igwe onyonyo ọhụụ ka mma. Iwe eweghi ya na ya gbawara 500 afọ gara aga. Obi dị ya ụtọ na ọ nwetara ihe dị egwu ugbu a. Nke a bụ ihe ọma.
Anyị na nso nso akpaghị aka nyocha saịtị nke na-ewe otu izu mmadụ abụọ iji jiri aka ha mezue. Ihe were anyị ihe dị ka awa 60 nwere ọtụtụ ngwa ngwanrọ anyị nyere ikikere ugbu a na-ewe anyị ihe na-erughị otu awa. Ahapụrụ m ụfọdụ ndị ahịa anyị nke nwere obi ụtọ na akụkọ anyị gara aga mara ma ọ bụrụ na ọrụ ọhụrụ ahụ ma mee ka ha mara nke ahụ - ebe ọ bụ ụgwọ anyị ugbu a bụ akụkụ dị nta nke ihe ha bụ, anyị na-agafe ego ndị ahụ na ndị ahịa anyị. Ọ dị oke mkpa - ihe ha kwụrụ maka oge 1 nwere ike nweta afọ niile nke akụkọ sitere n'aka anyị.
Imirikiti debanyere aha, mana otu dere m azụ wee kwuo na iwe were ha na ha nwere dọwara na ha kwụrụ ụgwọ dị ukwuu maka akụkọ gara aga. N'ezie, mgbe anyị nyefere akụkọ ahụ, ọ wereụ juru ha obi. Ha jiri akụkọ ahụ dịka ụkpụrụ maka ịmepụta atụmatụ azụmaahịa ha na ntanetị maka afọ na-esote. Onyinye ego ole na ole na akụkọ ahụ ga-ebute ọtụtụ narị puku dollar na nloghachi. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha chere, ruo mgbe anyị belata ọnụahịa anyị. Mgbe anyị wedatara ọnụahịa, anyị gbanwere n'ụzọ dị ukwuu site na uru dị ukwuu gaa ripoff.
Ugbu a na rant gafere, m ga-ekwu nke a. Anyị ga-arụ ọrụ nke ọma dị ka o kwere mee iji hụ na uru ọrụ anyị na-arụ karịrị ọnụahịa ị na-akwụ. Mgbe anyị mere nke ahụ, ị ​​ga-enweta nsonaazụ azụmaahịa dị elu. Mgbe ị rụpụtara nsonaazụ azụmaahịa dị elu, ị ga-enwe ekele maka ọrụ anyị na-emere gị. Ọ bụrụ na anyị enwetaghị nsonaazụ ndị ahụ, mgbe ahụ anyị nwere ike ịtụle nke ahụ.
Tags: gị n'ụlọngaịzụta-eriarụmọrụobi mgbawanweta ihe ị na-akwụpriceokwu nkondepụta ahịauru
Ọkt 29, 2013 na 1:54 PM
Agencylọ ọrụ ndụ…
Ọkt 29, 2013 na 2:03 PM
Gentile ndi amuma
Dee 13, 2013 na 8: 28 AM